Nhau dzeBhaibheri: Petro Anoshanyira Kornerio - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Amire apo ndimuapostora Petro, naavo vari shure kwake ishamwari dzake. Asika murumeyu anopfugamirirei Petro? Anofanira kudaro here? Unoziva kuti ndiani here?
Murumeyu ndiKornerio. Mukuru weuto reRoma. Kornerio haazivi Petro, asi akaudzwa kumukokera kuimba yake. Ngatiwanei kuti kwakaitika sei.
Vateveri vokutanga vaJesu vaiva vaJudha, asi Kornerio haazi muJudha. Asi anoda Mwari, anonyengetera kwaari, anoitira vanhu zvinhu zvizhinji zvomutsa. Eya, pakumwe kudeuka kwezuva ngirozi inosvika kwaari ndokuti: 'Mwari anofadzwa newe, uye achapindura minyengetero yako. Tuma varume kundotora mumwe murume anonzi Petro. Ari kugara muJopa pamba paSimoni, unogara pedyo negungwa.'
Eya, pakarepo Kornerio anotuma varume kundowana Petro. Mangwana, panosvika varumevo pedyo neJopa, Petro ari padenga rakati serere remba yaSimoni. Ipapo Mwari anoita kuti Petro afunge kuti anoona mucheka mukuru uchiburuka kudenga. Mumuchekamo mune marudzi ose emhuka. Muwirirano nomutemo waMwari, idzi mhuka dzaiva dzisina kuchena nokuda kwezvokudya, asika inzwi rinoti: 'Simuka, Petro. Uraya ugodya.'
Petro anoti: 'Aiwa!' 'Handina kutongodya chisakachena.' Asi inzwi rinoudza Petro kuti: 'Usaidza chisakachena icho Mwari zvino anoti chakachena.' Izvi zvinoitika katatu. Petro achishamisika kuti zvinorevei, varume vakatumwa naKornerio vanosvika pamba ndokubvunza Petro.
Petro anoburuka ndokuti: 'Ndini munhu wamunotsvaka. Mauyireiko?' Apo varume vanotsanangura kuti ngirozi yakaudza Kornerio kukokera Petro kumba kwake, Petro anobvuma kuenda navo. Mangwana wacho Petro neshamwari vanoshanyira Kornerio.
Kornerio aunganidzira pamwe chete hama dzake neshamwari chaidzo. Apo Petro anosvika, Kornerio anomugamuchira. Anogwadama ndokupfugama patsoka dzaPetro, sezvaunoona pano. Asi Petro anoti: 'Simuka; ini pachangu ndiri munhuwo zvangu.' Hungu, Bhaibheri rinoratidza kuti hakuna kururama kupfugamira munhu ndokumunamata. Tinofanira kunamata Jehovha bedzi.
Zvino Petro anoparidzira kuvakaunganavo. Petro anoti: 'Ndinoona kuti Mwari anogamuchira vanhu vose vanoda kumubatira.' Uye achikutaura, Mwari akatuma mudzimu mutsvene wake, vanhu vakavamba kutaura mitauro yakasianasiana. Izvi zvinoshamisa vadzidzi vechiJudha vakauya naPetro, nokuti vanofunga kuti Mwari anongoda bedzi vaJudha. Saka izvi zvinovadzidzisa kuti Mwari haarangariri vanhu vedzinza savari nani kana kuti vanokosha kuna Mwari kupinda vanhu verimwe dzinza. Hachiziri chimwe chinhu chakanaka chokuti isu tose tiyeuke here?
Mabasa 10:1-48; 11:1-18; Zvakazarurwa 19:10.
Murume akapfugama ari pamufananidzo ndiani?
Ngirozi inotii kuna Kornerio?
Mwari anoita kuti Petro aonei paanova padenga reimba yaSimoni muJopa?
Nei Petro achiudza Kornerio kuti haafaniri kupfugama omunamata?
Nei vadzidzi vechiJudha vakauya naPetro vachishamiswa?
Tinofanira kudzidzei chinokosha mukushanyira Kornerio kwakaita Petro?
Verenga Mabasa 10:1-48.
Mashoko aPetro ari pana Mabasa 10:42 anoratidzirei pamusoro pebasa rokuparidza mashoko akanaka oUmambo? (Mat. 28:19; Marko 13:10; Mab. 1:8)
Verenga Mabasa 11:1-18.
Petro akaratidza mafungiro api kutungamirira kwaJehovha pakwakava pachena maererano neVemamwe Marudzi, uye tingatevedzera sei muenzaniso wake? (Mab. 11:17, 18; 2 VaK. 10:5; VaEf. 5:17)
Kuenda kwakaita Petro kumba kwaKoneriyasi kunotidzidzisa chidzidzo chipi chinokosha?